နောနော် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / နောနော်
Category Archives: နောနော်
နောနော် – လေးလေးနက်နက် [ CD ]
01 ကျေနပ်တယ် 02 ဒီထက်ပိုပြီး 03 လေဟာနယ် 04 ခဏမျက်စိမှိတ်ပြီး 05 ညချစ်သူ 06 ရိုးရိုးလေးပဲ 07 အဆိပ်နဲ့လူ 08 မလာချင်ပါနဲ့ 09 ဆုံးရှုံး 10 အသည်းကွဲမိုက်ကရိုဖုန်း 11 စဉ်းစား 12 မှားတယ် 13 လေးလေးနက်နက် လေးလေးနက်နက် – နောနော် (CD)Streaming Player & One Click Download Links လေးလေးနက်နက် – နောနော် (CD) All Files Download With Mediafire Credit To Axlerose
January 18, 2013 Myanmar All Music Channel အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) အခွေ (တကိုယ်တော်) နောနော် Myanmar Artist New Myanmar Albums နောနော်2Comments
စေလိုရာစေ တဒင်္ဂ မင်းနဲ့ငါ အရေးအကြီးဆုံး အိပ်မက် ဆူး မင်းဆုံးတွေ့ချင်ပြီ အသေးအဖွဲ မေ့နေ ပြန်လာခဲ့တော့ Download Link Mediafire Download
November 22, 2011 thant zin win အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) နောနော် သအို New Myanmar Albums3Comments
အဆိုတော်အများ – ရေချိုပင်လယ်
၀၁။ ဒီအတိုင်းလား – Lဆိုင်းဇီ ၀၂။ မျက်ရည်များနဲ့ မတားချင်တော့ဘူး – ဇော်ပိုင် ၀၃။ မြေကြီးနင်းသူများ – ချစ်သုဝေ ၀၄။ ဘာဘာတူ ပါပါ့ပါ – Lလွန်းဝါ ၀၅။ချစ်သူ – Nကိုင်ရာ ၀၆။ ငါ့အနား နင်ရှိရင်ပြီးတာပဲ – နောနော် ၀၇။ နောက်ဆုံး အနမ်း – ချမ်းချမ်း ၀၈။ ပြန်ဆုံမယ် – ဖြိုးကို ၀၉။ ဟက်ပီး နယူးရီးယား – ရေဗက္က၀င်း ၁၀။ တစ်ရေးနိုးတဲ့ အချိန် – ဂျီလတ် ၁၁။ ချစ်ခဲ့တာတွေ မေ့ပေးပါ – နေနေ ၁၂။ ဟိုတုန်းက ချစ်သူ – စနို … Continue Reading →
October 26, 2011 mars အခွေ (အများ) ဂျီလတ် ရေဗက္က၀င်း နေနေ နောနော် ဇော်ပိုင် ချစ်သုဝေ ချမ်းချမ်း Lဆိုင်းဇီ Lလွန်းဝါ Nကိုင်ရာ စနို ဖြိုးကို 8 Comments
နောနော်ရဲ့ သီချင်းများ (ဆိုလို အယ်လ်ဘန်များ)
အတိုင်းထက်အလွန် Download အိမ်မက်ထဲကလူ Download အကန့်အသတ်မရှိ Download မလှည့်စားနဲ့ Download မတန်ဘူး Download တော်ပြီနော် Download ဘယ်သူလဲ Download ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ Download ဘွဲ့ Download ဖက်ထားမယ် Download တံခါးပိတ်လိုက်ပါဦး Download အောက်ကလင့်တွေကတော့ ဒီဆိုက်ကနေဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးထားတာပါ။ နောနော်ရဲ့ ဆိုလို အယ်ဘမ်တွေကိုပါ စုပေးလိုက်ပါတယ်။ အတိုင်းအထက်အလွန် Download Album အကန့်အသတ်မရှိ Download Album အိမ်မက်ထဲကလူ Download Album
August 9, 2011 norwyne နောနော် Myanmar Artist နောနော် 1 Comment
အသက်ရှင်ခြင်း တစ်ခန်းရပ်ဇာတ်လမ်း ချစ်ခြင်းဒိုင်ယာရီ အဖြူရောင်နှောင်ကြိုး သတိရပြီ အမြဲတမ်းရှိမဲ့သူ နေ့သစ် ရင်ဆိုင်ဦး ဘယ်တော့မှ မေ့ချင်တယ် ရည်ရွယ်သူသို့ အရှုံးမပေးနဲ့ လမ်းခွဲ တစ်သက်တာ ————- တေးဆို-နောနော်၊အေသင်ချိုဆွေ၊ချမ်းချမ်း၊ဖိုးကရင်၊ဆွိဝတ်ရည်သောင်း၊ညီလင်းထွန်း၊နွေးနွေးကို၊လေးနက်၊သူသူဟန်နှင့်အဆိုတော်များစွာ…………. Download Ifile It Meidafire
June 24, 2011 thant zin win အခွေ (အများ) အေသင်ချိုဆွေ နောနော် ချမ်းချမ်း New Myanmar Albums 1 Comment
အချစ်၏ သင်္ကေတ-ဟန်ထွန်း,အယ်နောင်း,ဖိုးသား,သအို,နောနော်,လင်းလင်း,ဂျီလတ်,အစိုင်း,အောင်ကိုမြင့် ၁။အခန်းဆက်အလွမ်း(ဟန်ထွန်း) Download ၂။ငါဟာငါမဟုတ်ဘူး(အယ်နောင်း) Download ၃။အရောင်ဆိုးပေးပါ(ဖိုးသား) Download ၄။သစ်ရွက်(သအို) Download ၅။မသွားပါနဲ့ (နောနော်) Download ၆။နောင်တအတုများ(လင်းလင်း)Download ၇။အိမ်ပြန်အလွမ်း(ဂျီလတ်)Download ၈။ပြန်ခဲ့ပါ(အစိုင်း) Download ၉။မရှိမဖြစ်(အောင်ကိုမြင့်)Download ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လည်းကူညီကြပါဦး။ Download Album
February 21, 2011 kogyithet အစိုင်း (BlackHole) အဆိုတော် (ကျား) အယ်နောင်း ဂျီလတ် နောနော် လင်းလင်း ဟန်ထွန်း သအို Myanmar Artist New Myanmar Albums ဖိုးသား အောင်ကိုမြင့်2Comments
နောနော် – အိမ်မက်ထဲကလူ
၁။ ဖက်ထားမယ် ၂။ တံခါးပိတ်လိုက်ပါဦး ၃။ အဖြည့်ခံ ၄။ ဘွဲ့ ၅။ ပြောင်းလဲမသွားဘူး ၆။ အိပ်မက်ထဲကလူ ၇။ တော်ပြီနော် ၈။ ငါနဲ့မင်း ၉။ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ ၁၀။ ပျံသန်းခြင်း ၁၁။ ကမ်းနဲ့ဝေး ၁၂။ ဘယ်သူလဲ
July 29, 2010 joesteven122 အဆိုတော် (ကျား) နောနော် Blaze New Myanmar Albums 95 Comments
City FM 8th Anniversary
01-ဂီတအစဘယ်သူက – ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၊ Jenny 02-ရင်ထဲကလာတဲ့သီချင်း – ဖိုးကာ 03-အချစ်နဲ့ဂီတာ – ရေဗက္ကာဝင်း 04-ဂီတာ Shade – ဟဲလေး ၊ ရတနာမိုင် 05-သီချင်းမရှိတဲ့ဂီတာ – L ဆိုင်းဇီ 06-တဖက်သတ် – နောနော် 07-အချစ်ရဲ့သီချင်းသံ – ချမ်းချမ်း 08-ကြယ်တွေကိုအိပ်မက်ခြင်း – ဇော်ဝင်းထွဋ် 09-အဖြူအမည်း – ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ၊ ဘရိတ်ကီ 10-ညလူပျို – မေဆွိ 11-ဂီတာကြိုးလေးပြတ်သွားပြီ – အနဂ္ဂ ၊ သံသာဝင်း Myanmarsongs.Net မှာ တင်ထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေတာပါ. Credit @ http://www.myanmarsongs.net/
July 27, 2010 blackparade85 ဘရိတ်ကီ ဖိုးကာ အနဂ္ဂ အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ထက်နေခြည် နောနော် မေဆွိ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ချမ်းချမ်း ဟဲလေး သံသာဝင်း Jenny Lဆိုင်းဇီ New Myanmar Albums 19 Comments
အိမ်မက်လား တကယ်လား ၁
၀၁။ ခွင့်လွတ်ရင်းနဲ့ – ဟန်ထွန်း ၀၂။ ကျိန်ပြောတတ်သူ – Rဇာနည် ၀၃။ ကိုယ်မင်းအနားပြန်လာပြီ – သအို ၀၄။ ရင်ဘတ်ကလူ – အယ်လွန်းဝါ ၀၅။ မင်းရှိတဲ့နေရာ – နောနော် ၀၆။ ငါ့ဘက်ကမှားတာပါ – လင်းလင်း ၀၇။ လမ်းခွဲချိန် – မောင်မောင်ဇော်လတ် ၀၈။ ကမ္ဘာပျက်တဲ့နေ့ - မင်းမော်ကွန်း ၀၉။ ငါ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုရှင်းပြခြင်း – ဟန်ထွန်း၊ သအို၊ လင်းလင်း ၁၀။ မြို့ပြလမ်းခွဲ – ဂျီလတ် ၁၁။ ရေပေါ်ဆီ- the jungle
February 13, 2010 mmsong အခွေ (အများ) ဂျီလတ် နောနော် မောင်မောင်ဇော်လတ် လင်းလင်း မင်းမော်ကွန်း ဟန်ထွန်း သအို Lလွန်းဝါ New Myanmar Albums Rဇာနည် Valentine Albums 32 Comments
ဒီတခါတော့ ချစ်သူနဲ့အနေဝေးလို့ ဆွေးနေကြတဲ့သူတွေအတွက် အလွမ်းတေးစု ဆိုပြီးတော့ Playlist လေးတခုပါ.. ၁) အဆုံးသတ်မသွားဘူး – အဲလက်စ် ၂) နီးနီးလေးနဲ့ဝေး – Big Bag ၃) ကြုံရင်ပြောပေးပါ – Big bag ၄) ဝေးပြီးတဲ့နောက် – G လတ် ၅) ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းချင်း – ဟန်ထွန်း ၆) အလွမ်းရဲ့ည – L လွန်းဝါ ၇) အလွမ်း – လေးဖြူ ၈) မရေရာဘူး – လေးဖြူ ၉) စာမျက်နှာ ၁၅ – လေးဖြူ
January 17, 2010 amedeo စည်သူလွင် ငယ်ဆူး နောနော် ဆောင်းဦးလှိုင် လေးဖြူ မာရဇ္ဇ မျိုးကြီး မျိုးကျော့မြိုင် ဟန်ထူးလွင် ဟန်ထွန်း Big Bag Lလွန်းဝါ Media Rဇာနည် Wanted 20 Comments
နာဂစ်ရံပုံငွေ တေးရေး – SNO တေးဆို – မျိုးကြီး၊ စံပီး၊ နောနော်၊ ဆုန်သင်းပါ၊ မီးမီးခဲ၊ ရေဗက္ကာဝင်း၊ ဇမ်နူး သူဋ္ဌေးကုန်းအသင်းတော်ကလေးများ
June 9, 2009 Yee Wai Aung အခွေ (အများ) ဆုန်သင်းပါရ် ဇမ်နူး ရေဗက္က၀င်း နောနော် မီးမီးခဲ မျိုးကြီး Nargis relief3Comments
နောနော် – အကန့်အသတ်မရှိ
၀၁။ Intro ၀၂။ ကြိုး ၀၃။ အကန့်အသတ်မရှိ ၀၄။ မွန်မြတ်ခြင်း ၀၅။ ပုံသွင်းပစ်မယ် ၀၆။ မလှည့်စားနဲ့ ၀၇။ နိဒါန်း ၀၈။ မဟုတ်တော့ဘူး ၀၉။ ဘယ်တော့မှတို့မဝေးဘူး ၁၀။ အေးဆေးပဲ ၁၁။ လူသားတိုင်း
November 1, 2008 ME *MMA* အခွေ (တကိုယ်တော်) နောနော် Myanmar Artist New Myanmar Albums 52 Comments